SIMUKA URWISE HIV
Chii chinonzi ongororo yemushonga unodzivirira zvirwere?
Immune system yemuviri wenyu inokudzivirirai kubva kuzvirwere. Mushonga unodzivirira zvirwere unodzidzisa immune system yemuviri kudzivirira umwe utachiona kana kurwisa chirwere chakatsanangurika. Kuti vagadzire mushonga unodzivirira zvirwere, vaongorori vanofanira kutanga nekuongorora muvanhu. Ongororo yemushonga unodzivirira zvirwere inotsvaga kuti mishonga inodzivirira zvirwere haina njodzi here (haikonzeresi matambudziko kuhutano) uye kana muviri yevanhu ichidaira kumushonga yetsvakurudzo. Ongororo yemushonga inodzivirira zvirwere inogona kushandiswa kutsvaga kuti mushonga unodzivirira zvirwere unorwisa kana kudzivirira utachiona kana chirwere chakatarwa here. Zvinotora ongororo zhinji dzemishonga yekudzivirira zvirwere kugadzira mushonga wekudzivirira zvirwere usina njodzi uye uchinyatsoshanda.
Hutano nekodzero dzevachapinda mutsvakurudzo zvichachengetedzwa sei?
Kuchengetedza hutano nekuremekedza kodzero dzevachapinda mutsvakurudzo zvinokosheswa zvakanyanya nemunhu wese ari muHIV Vaccine Trails Network (HVTN) neJanssen Vaccine &Prevention B.V, vari pamwe neJanssen Pharmaceutical Companies Of Johnson &Johnson. Vashandi vepakiriniki vachapa vangangopinda mutsvakurudzo umboo hwakadzama pamusoro petsvakurudzo yemushonga wekudzivirira zvirwere uye zvichaitwa, zvamungangowana kana njodzi dzekuva mutsvakurudzo, uye kodzero dzavanenge vanadzo sevari mutsvakurudzo. Hongu, munhu akasununguka kuti hongu kana kwete kupinda mutsvakurudzo - sarudzo ndeyavo chete.
Munguva yetsvakurudzo, vashandi vepakiriniki vachaongorora vari mutsvakurudzo kuona kuti mishonga yekudzivirira zvirwere yetsvakurudzo haisi kukonzera matambudziko ehutano. Vashandi vepakiriniki vachabvunza zvakare vari mutsvakurudzo maererano nemamwe matambudziko avangange vachisangana nawo nekuda kwekuva mutsvakurudzo, uye vachabatsira kumapedza kana kumagadzirisa.
Pane mamwe mapoka akazvimiririra anoita zvekuchengetedza kodzero dzevari nehutano hwevari mutsvakurudzo. Makiriniki etsvakurudzo ari pedyo nemi achakupai umboo hwakanyanya pamusoro pemapoka aya kana muine chido.